Shiinaha Maalinta nacasnimada ee aan sunta ahayn ee qosolka leh ee caraf udgoon udgoon oo kaftan iyo maaweelo soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaal | PENGWEI
Buufisyada udgoonka leh waa buufin aad u xun oo udgoon. Marka la isticmaalo, waxay soo daysaa ur aan fiicnayn oo la mid ah farta ur leh.
Nooca: Agabka Qurxinta Xisbiga
Habka Daabacaadda: 4 midab
Nooca Shayga: Ciyaaraha madadaalada ee Maalinta nacasnimada, Halloween…
Buufinta udgoonka ayaa ah mid aad u qosol badan. Haddi aad rabto in aad dadka kale ka qosliso ama ka takhalusto. Ku buufin Waxay qaadan doontaa waqti dheer sidoo kale - ilaa inta cadadka ku jira dhalada. Marka la furo, waxay hawada ka buuxin doontaa ur xun. Is ogow naftaada.
Magaca Shayga Buufin fart ah/ buufin caraf udgoon
Xirmooyinka Cutubka Dhalada daasadda/birta
Marmar Maalinta nacasnimada, Halloween...
Miisaanka Kiimikada 40g
Baaxadda Cabbirka 42.5*31.8*17.4cm/ctn
Faahfaahinta Xirmada 48pcs/ kartoon midab leh
Shuruudaha ganacsiga FOB
Mid kale Waa la aqbalay
1.Xeer deegaan iyo wax aan sun ahayn
2. Ku sii jir wakhti dheer meelo xaddidan
3.Professional qaabeynta, qaababka canseed cute customized
4.Skin-saaxiibtinimo, tayada sare leh, qiimaha ugu dambeeyay
1. Adeegga habaynta waa la oggol yahay iyadoo lagu salaynayo shuruudahaaga gaarka ah ee ku saabsan buufinta barafka ee orsada
2. Summadaada waa loo oggol yahay in lagu daabaco.
3. Qaababku waxay ku jiraan xaalad qumman ka hor inta aan la dhoofin.
Waa caado in dadka kale khiyaanada lagu ciyaaro maalinta nacasnimada Abriil. Waxa loo isticmaali karaa sidii qalab aad kula ciyaarto khiyaamada dadka kale. Waxaad ku martiqaadi kartaa asxaabta qaarkood inay ku raaxaystaan ​​xafladahaaga. Ka dib isticmaal buufinta udgoonka leh adigoon dareemin marka ay dadku dabaaldegayaan oo ay ciyaarayaan ciyaaraha.
Qof walba ha ku qoslo hadiyadda gaarka ah ee buufinta udgoonka!
Fur furka. Kaliya ku cadaadi nozzle-ka dhanka bartilmaameedka xagal yar oo kor u kaca oo riix sanka.
Si degan ugu daadi qof. waxaad doonaysaa inaad khiyaamo ku ciyaarto.
Sida hawada hawada oo dhan, waa in aan lagu buufin meel ay hawadu liidato, meel yar oo xiran, ama olol u dhow.
Ka ilaali iftiinka qoraxda hana u bandhigin heerkul ka badan 50 darajo celcious.
Ha daloolin ama ha gubin xitaa isticmaalka ka dib.
Waa inaadan kor u buufin. Sababtoo ah waxa ku jira ayaa xannibi doona qulqulka.
Digtoonow ha ku buufin dhinaca indhaha.
Ha ku buufin olol qaawan ama wax kasta oo shamac ah (炽热的).
Sigaar ha cabbin markaad isticmaashid.
Ka ilaali meel aanay carruurtu gaadhi karin marka laga reebo kormeerka dhow ee dadka waaweyn.
Haddii aad wax dhib ah kala kulanto shay kasta, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xidhiidho. Waxaad sidoo kale fariin u diri kartaa hoosta ama siyaabahan soo socda.
Hore: Lagu Sameeyay PRC Ubax Luul buufis loogu talagalay Qurxinta Ubaxa
Xiga: Alaabooyinka xakamaynta saliidda ee ugu wanaagsan ee lagu buufiyo shaambada timaha ee bilaashka ah ee lagu buufiyo daryeelka timaha
buufin fart ur leh
buufin ur leh
buufin fart oo ur ah
buufin ur udgoon